USkhumba uzoqhakambisa impilo yosomahlaya
USKHUMBA Hlophe uzoba umethuli wohlelo olusha lapho kuzokhonjiswa kuShowmax oluthi Trippin’ with Skhumba nala ezohambela khona izindawo lapho kwazalelwa khona osomahlaya bakuleli abahlukene ISITHOMBE: SITHUNYELWE
YIZE abalandeli babo behlala bebabona kuthelevishini nasemadolobheni ahlukene beqhulula amahlaya kodwa iningi alibazi ukuthi basuka kuphi futhi bakhule kanjani osomahlaya asebezakhele udumo kuleli.
Lokhu kuzophela maduzane njengoba sekuqalile ukuqoshwa kohlelo olusha oluzokwethulwa usomahlaya uSkhumba Hlophe, iTrippin’ With Skhumba, ezoqala ngoFebhuwari 28, esiteshini iShowmax.
USkhumba uzobe ehambela izindawo la osomahlaya abahlukene abazobe bezalelwe khona ezwe ngabantu abahlukene ukuthi bangabantu abanjani.
Ekhuluma ngalolu hlelo, uSkhumba uthe osomahlaya bangabanye babantu abathandwayo kuleli kodwa abagcina ukubonakala esiteji.
“Akukho abakhuluma ngakho ngaphezu kokuthi basho amahlaya. Ngakho-ke kulolu hlelo sifuna ukugubha sibheke izimpilo zabo ukuthi baphumaphi kodwa ngaphezu kwalokho kuningi esizokukhipha kubona bakuhlalise obala njengoba ngihlale ngenza uma ngikhuluma nanoma ubani odumile ohlelweni lwami emsakazweni,” kusho uSkhumba.
Kulolu hlelo kuvele ukuthi kuzobonakala uCeleste Ntuli waseMpangeni, KwaZulu-Natal, Siya Seya wasePort Elizabeth, Salesman wasePitoli, Mashabela Galane waseMoletjie, eLimpopo, Tumi Morake waseBloemfontein noSchalk Bezuidenhout waseKempton Park, eGoli.
USkhumba uveze ukuthi isiqephu sokugcina sizothatha ihora lonke nalapho eyobe ekhuluma khona nabo bonke ababonakale kulolu hlelo, aphinde agqamise usomahlaya oyedwa omusha amthole edolobheni alihambele.
Umqondisi walolu hlelo, uVincent Moloi, uthe uSkhumba ungumuntu ohlekisayo ngakho abantu bazolujabulela lolu hlelo.
“Luzoveza into yangempela, akukho okuzobalekelwa ngendlela umuntu akhule ngayo. Ngakho abantu abakulungele ukuhleka,” kuchaza uVincent.